ESpain kukho imivalo engaphezulu kunevenkile zeencwadi ... Okanye akunjalo? | Uncwadi lwangoku
Imivalo emininzi kuneevenkile zeencwadi ... Okanye akunjalo?
Ukunyaniseka kunye nentliziyo yam esandleni, ndiza kuthi kwiincoko ezininzi malunga noncwadi kunye neencwadi kunye nabahlobo ndigxeke ukuba eSpain, ilizwe lethu, kukho iindawo ezininzi zokuzonwabisa kunezitolo zeencwadi. Wonke umntu uyazi ukuba imakethi yencwadi imbi kangakanani apha kwaye wonke umntu uyazi ukuba, njengathi abantu baseSpain, bambalwa abaziyo ukonwabela ithambeka elilanga kunye neebhiya ezimbalwa ... Enye into ayithathi kwenye, yile icacile, kwaye kukho ixesha layo yonke into: ukufunda kunye nokuya kwiklabhu kunye nabahlobo, kodwa yintoni eSpain kukho imivalo emininzi kuneevenkile zeencwadi yinyani ... okanye hayi?
Ewe, ngethamsanqa akunjalo ngokupheleleyo! Sifumene idolophu encinci eSpain apho kukho iivenkile ezininzi kuneevenkile ... Ngaba uyafuna ukwazi ukuba iphi? Emva koko, sityhila le mfihlakalo yokuba u-Iker Jiménez omkhulu angafunda kwaye aphande ...
I-Urueña, iVilla yencwadi
Kufunyenwe KwiValladolid, malunga neekhilomitha ezingama-50 ukuya emantla mpuma ngokukodwa kwaye ngokusesikweni inoluhlu lwe Villa yencwadi. Kodwa i-Urueña ayisiyiyo ikona kuphela yokubhala kodwa inezinto ezininzi zokufundisa ...
Akunakwenzeka ukuba idolophu enabemi abangama-200 kuphela (idatha eqikelelweyo) ineemyuziyam ezi-5 zizonke (sifunde ukuba enye ingomculo, enye imalunga nembali yencwadi enye inengqokelela enkulu yeepop- phezulu amabali) neevenkile zeencwadi ezili-11… Uzifunda njani! Khange ndikholelwe… ukuba oku kukungazi ukuba kufuneka sikhathalele njani okubalulekileyo, inkcubeko, iincwadi kunye nokuba zinokusifundisa zize zisidlulisele ntoni, asazi ukuba yintoni.
Kukho ezinye iindawo zokuhlala kule ncwadi, kodwa eSpain iUrueña kuphela kwayo. Abanye onokubandwendwela banjalo IWigtown, UK, Tuedrestand, eNorway o UFontenoy-la-Joûte eFrance.
Abantu baseUrueña, egameni lika Uncwadi lwangoku, kwaye ingakumbi kum, enkosi, enkosi, enkosi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Imivalo emininzi kuneevenkile zeencwadi ... Okanye akunjalo?
UAlberto Fernandez Diaz sitsho
Molo kwakhona, uCarmen.
U-Urueña wayevakala njengesiqhelo kum, kodwa andazi okanye andikhumbuli ukuba ukwiphondo laseValladolid.
Unyanisile: kuyamangalisa malunga nale dolophu. Bendingazi ukuba uthini ngaye. Into endizibuza yona yile: ngaba bambalwa abemi, inokwenzeka njani into yokuba kubekho ishishini kwiivenkile ezininzi zeencwadi?
Ndingathanda ukutyelela iimyuziyam zakho. Kwaye, ewe, iivenkile zakho zeencwadi.
Ngokuqinisekileyo bambalwa kakhulu abantu eSpain abayaziyo into oyithethayo kweli nqaku. Inika umdla kakhulu.
Ngelishwa, sele uyazi ukuba inqaku elomeleleyo leSpanish ayisiyo nkcubeko. Akwaba bekungenjalo.
Ukwanga kunye nombulelo ngokwabelana ngolu lwazi.
Phendula u-Alberto Fernández Díaz
Imbali yePasika esihlala siyibona. Kutheni singazifundi iincwadi?
Iincwadi ezi-7 zomphefumlo onesizungu